Celegroup - Page 189 of 194 - NEWS AND MEDIA
စိန်ခေါ်မှုမှ ရရှိနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း (၁၀)ချက်
စိန်ခေါ်မှုမှ ရရှိနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း (၁၀)ချက် ဒီနေ့ကတော့ စိန်ခေါ်မှုမှ ရရှိနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း (၁၀)ချက်ကိုဝေမျှချင်ပါတယ်။အမှတ်စဉ် (၁) တစ်ဦးချင်းဆီ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်စေခြင်း စိန်ခေါ်မှုဆိုတာ ကိုယ်တိုင်း စရတာပါ။ကျတော်နဲ့ ကျတော် စီးချင်းထိုးတဲ့ပွဲပါ။ဒီတိုက်ပွဲ ကျတော့်ရဲ့ ပျင်းရိစိတ်၊ အကြောင်းပြတတ်တဲ့ စိတ်နဲ့မရမက ကြိုးစားပြီး ရှေ့တိုးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နှစ်ခုက တိုက်ပွဲဝင်ကြရပါပြီ။ အကယ်၍ မိမိက ပျင်းရိတဲ့စိတ်၊ အကြောင်းပြတတ်တဲ့ စိတ်ကိုအနိုင်ရပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်စိန်ခေါ်ထားတဲ့ လေ့လာသင်ယူမှု ဖြစ်စေအလုပ်တာဝန်တစ်ခုဖြစ်စေ၊ အကျင့်တစ်ခုမွေးမြူတာဖြစ်စေ […]
အလုပ်ကြိုးစားတိုင်းလည်း မချမ်းသာနိုင်ပါဘူး တစ်ခါက အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ညစ်နေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့ မေးလိုက်ပါတယ်သားငယ်လေး မင်းဘာတွေ တွေးပြီးစိတ်ညစ်နေတာလဲကွ အဘိုးကြီးက ဘေးမှာဝင်ထိုင်ရင်းမေးလိုက်တယ်ကျွန်နော်ဗျာ အခုထိမချမ်းသာနိုင်သေးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်စိတ်ပျက်နေတာ အလုပ်ကြိုးစားတိုင်းလည်း မချမ်းသာနိုင်ပါဘူးအဘိုးကြီးက မျက်လုံးပြူးသွားကာဟေ မင်းကချမ်းသာချင်လို့လား လူငယ်က ကသိကအောက်ဖြစ်သွားကာ ဦးလေးကလဲဗျာ မချမ်းသာချင်တဲ့သူဘယ်သူရှိလို့တုန်း လူတိုင်းချမ်းသာချင်ကြတာပဲဗျအေးပါ ဟုတ်ပါပီ။ ဒါနဲ့ မင်းချမ်းသာချင်တော့ အခုဘာတွေလုပ်နေတုန်း ကျွန်နော် အခု Company တစ်ခုမှဝန်ထမ်းလုပ်နေတာ ၁၀ နှစ်ကျော်ပီ။ အလုပ်လဲ ကြိုးစားတာပဲဗျာ၊ ခုထိမချမ်းသာသေးဘူး အဘိုးကြီးကတစ်ချက်ပြုံးသွားကာမင်းအခု […]
အားနာတတ်တိုင်း ကောင်းသလား တောင်းရမ်းရမှာ အားနာတော့၊ သူတောင်းစား ငတ်သေသွားတယ်။အကြွေးတောင်းရမှာ အားနာတော့၊ ဆိုင်လုံးလုံးပိတ်လိုက်ရတယ်။ ချစ်ခွင့်တောင်းရမှာ အားနာတော့၊ ချစ်တဲ့သူ သူများနောက်ပါသွားတယ်။ပြတ်ပြတ်သားသားဆွေးနွေးရမှာ အားနာတော့၊ သူများနဲ့ အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ ထူးချွန်တဲ့လူတွေနဲ့ ကပ်ပေါင်းရမှာ အားနာတော့၊ တစ်ဖြည်းဖြည်း ရိုးအသွားတယ်။အမှားဝန်ခံရမှာ အားနာတော့၊ ပြုပြင်ဖို့ အခွင့်အရေး နည်းပါးသွားတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို အားမနာတတ်ဘူးလို့ပြောရင်၊ အပြစ်တင်တဲ့စကားဖြစ်ပေမဲ့ အားနာတတ်လွန်းရင် စိတ်ပျော့ညံ့မှု တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အပြင် အလုပ်ဖြစ်ဖို့ လုံးဝအတားအဆီးဖြစ်ပါကြောင်း။ CreditOriginalUploader unicode အားနာတတျတိုငျး […]
တစ်ဖက်ကန်းနေကြသူများ.? မျက်လုံးရှိရက်သူများအပြစ်ကိုပဲမြင်တတ်တာအ-ကုသိုလ် မျက်လုံးပါ။နားရှိရက်သူများ ဒုက္ခကိုသာကြားချင်တာအ-ကုသိုလ် နားပါ။ ပါးစပ်ရှိရက်တစ်ဖက်သား မကောင်းကြောင်းကိုယ့်ကောင်းကြောင်းပဲပြောတတ်တာအ-ကုသိုလ် ပါးစပ်ပါ။ လူအချို့ဟာကိုယ့်ဖက်ကို ကြည့်ရင်မျက်စိတစ်ဖက် ကန်းနေကြပါတယ်။သူတစ်ပါးတိုးတက်ကြီးပွားကြောင်းကြားရရင်နားတစ်ဖက်ကန်းနေကြပါတယ်။ သူတစ်ပါးကောင်းကြောင်းပြောဖို့ကြုံလာရင်နှုတ်ဆိတ်ပြီးအ-နေတတ်ကြပါတယ်။လောကကြီးမှာ လူပီသဖို့ရာကိုယ်ချင်းစာတရားထားတတ်မှလူဟာ လူနဲ့တူမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ဇောင်းနင်းပြီးတစ်ဖက်ပိတ်နေတတ်တဲ့အထဲမှာ ကိုယ်မပါစေနဲ့။ CreditOriginalUploader unicode တဈဖကျကနျးနကွေသူမြား.? မကျြလုံးရှိရကျသူမြားအပွဈကိုပဲမွငျတတျတာအ-ကုသိုလျ မကျြလုံးပါ။နားရှိရကျသူမြား ဒုက်ခကိုသာကွားခငျြတာအ-ကုသိုလျ နားပါ။ ပါးစပျရှိရကျတဈဖကျသား မကောငျးကွောငျးကိုယျ့ကောငျးကွောငျးပဲပွောတတျတာအ-ကုသိုလျ ပါးစပျပါ။ လူအခြို့ဟာကိုယျ့ဖကျကို ကွညျ့ရငျမကျြစိတဈဖကျ ကနျးနကွေပါတယျ။သူတဈပါးတိုးတကျကွီးပှားကွောငျးကွားရရငျနားတဈဖကျကနျးနကွေပါတယျ။ သူတဈပါးကောငျးကွောငျးပွောဖို့ကွုံလာရငျနှုတျဆိတျပွီးအ-နတေတျကွပါတယျ။လောကကွီးမှာ လူပီသဖို့ရာကိုယျခငျြးစာတရားထားတတျမှလူဟာ လူနဲ့တူမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့တဈဖကျဇောငျးနငျးပွီးတဈဖကျပိတျနတေတျတဲ့အထဲမှာ ကိုယျမပါစနေဲ့။ CreditOriginalUploader
January 30, 2021 Celegroup1975 0
မိဘတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီစာလေးကိုဖတ်ပေးပါ အသက် ကြီးလာတဲ့ အခါခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးဟာနည်းပါး လာတတ်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာရိုးတွင်းချဉ်ဆီထဲက သွေးနဲ့အစားထိုးပြီးလည်ပတ်ကြရတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်ပြီဆိုရင်စိတ်တွေဟာ ငယ်မူ ပြန်သွားပြီ။အဲဒါကိုသူငယ်ပြန်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ကိုယ်တွေလည်းရှောင်လွှဲလို့ မရပါဘူး။ဘယ်သူမှလည်းရှောင်လွှဲလို့ မရပါဘူး။ အဲဒါ အသက်ကြီးတဲ့ သူတိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝပါ။ကိုယ့်မိဘတွေလည်းအဲဒီလို ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင်စိတ်ဆိုးလွယ်တာ၊စိတ်ကောက်လွယ်တာ၊နေရာတကာ ဝင်ပါတာ မျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အခါမှာအိမ်ထောင်ရှိတဲ့ ယောက်ျားတွေဆိုရင်မိန်းမတွေရဲ့သာသာထိုးထိုး ပြောဆိုမှုကြောင့်မိဘတွေအပေါ်မှာအမြင် စောင်းတတ်ပါတယ်။တစ်ချို့ သား၊ သမီးကလည်း”မိဘက မိဘပဲ၊မှားရင်တော့ ပြောရမှာပဲ… “ဆိုတာ မျိုးတွေကို လုပ်တတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့သဘာဝတရားကြောင့် […]